Siyaasadda Dalkan ee Xoriyadda Falastiin - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka arrimmaha dibadda Carl Bildt. Dawladda: Fredrik Sandberg/Scanpix.
Siyaasadda Dalkan ee Xoriyadda Falastiin
La daabacay onsdag 21 september 2011 kl 14.18
Dawladda Iswiidhen ayaa u aragta inuu caqabad ku noqon doono wadahaddalladii nabadeed haddii uu maamulka Falastiin ka dhabeeyo dalabka ah in dalkiisa loo aqoonsado dal gaar u taagan kursina ku leh Hayadda Qaramada Midoobey.
Sidaa waxaa sheegay madaxa dawladda Fredrik Reinfeldt iyo Carl Bildt wasiirka arrimmaha dibadda mar ey shir jaraa'id ku qabteen habeenimadii arbacada ee xilliga dalkan magaalada New York.
Maamulka Falastiin ayaa sheegay iney maalinta jimcada hor geeyn doonaan dalab middaa la xiriira hayadda Qaramada Midoobey. Waxaanse illaa hadda cadayn mowqifka dalkan Iswiidhen uu middaa ka taagan yahay.
- Nasiibdarro waxaan ogsoonnahay in dalab noocaasiya aannu ka suurtageli doonin hayadda ammaanka ee Qarammada Midoobay. Dawladda Mareeykanka ayaa si cad horeba ugu dhawaaqday iney middaa hor-joogsan doonto saarina doonto codka diidmada ee (Veto). Sidaa daraadeed waxaannu isku dayeynaa in aannu wada-xaajoodka u rogno dhan suurtagal ah. Xaaladdani waxay dhalin kartaa in wada-haddalladii nabadeed ey dib u furmaan eyna nabad horseedaan.
Laakiin waa sidee mowqifka dawladda Iswiidhen. Haddii dalkani xubin ka ahaan lahaa guddiga ammaanka muxuu ahaan lahaa mowqifkiisa?
- Waa su'aal aan meesha oolin. Haddii xitaa sida aad sheegtay xaajadu ahaan lahayd waxay ahaan lahayd wax aan dhici Karin, maadaama waddan ka mid waddammada xubnaha joogtada ah ku leh hayadda ammaanka uu ku dhawaaqay inaanu marnaba yeeleyn.
Miyaanay ahayn su'aal macquul ah in la is weeydiiyo mowqifka dalka Iswiidhen?
- Haa, waa su'aal male ah, maadaama aanu dalka Iswiidhen xubin ka ahayn guddiga ammaanka, xaaladdaa manta ma taagnin. Markaa waxay noola muuqataa inay wanaagsanaan lahayd in dhabba kale la qaado.
Haddii ay ka socon waydo guddiga ammaanka oo markaa la hor-keeno golaha wayn ee Qaramada Midoobey su'aal la xiriirta in kor loo qaado meeqaanka dawladda falastiin iyo in loo aqoonsado dal inuu yahay, ma qaadan lahaa dalkani mowqifkaa?
- Waxay markaa ku xiranaan doontaa sida wax loo soo ban-dhigo, sida uu sheegay Carl Bildt, wasiirka arrimmaha dibaddu.
Fredrik Reinfeldt ayaa ka hadli doona xarunta Qaramada Midoobey gelinka hore ee maalinta jimcada, iyadoona qudbaddiisu inta badan ku salaysnaan doonto xuquuqda haweenka iyo awoodda siyaasadda iyo dhaqaalaha.